Zoma Mainty 2015, tolotra tsy azo tohaina izay tsy azonao hadino | Vaovao IPhone
Zoma mainty 2015, tolotra tsy hay tohaina izay tsy azonao hadino
Mety efa fantatrao izany Zoma Mainty ity zoma ity, antoko izay efa nanangana ny tenany any Espana ho iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny taona hahazoana vokatra misy fihenam-bidy amin'ny karazany rehetra.
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany, maro amin'ireo fihenam-bidy ireo no mifandray mivantana amin'ny iPhone na ny tontolon'ny Apple amin'ny ankapobeny ka apetratsika amin'ity lahatsoratra ity izy ireo. Araho hatrany satria matetika, manolotra ora maromaro Ary raha tara ianao dia very fotoana volamena iray hahazoana ilay vokatra misy fihenam-bidy.
1 Manomboka amin'ny 9:00
1.1 Charger Aukey miaraka amina USB 3: € 11,99
1.2 Bateria 6.000 mAh: 15,99 €
1.3 Miaraka amin'ny refy: € 114,99
1.4 Tselatra helatra voamarina: € 7,19
1.5 Batterie 5.000 mAh misy tariby mandeha amin'ny Jiro: € 23,99
1.6 Tranga misy batterie anatiny ho an'ny iPhone 6: € 14,39
1.7 Mpandahateny Bluetooth 3W: € 39,19
1.8 Spigen Slim Armor Case ho an'ny iPhone 6s: € 14,99
2 Manomboka amin'ny 10:00
2.1 Carger aukey misy seranana USB 2: € 16,99
2.2 Speaker Bluetooth tsy misy rano: € 28,99
2.3 Headphones Bluetooth ho an'ny fanatanjahan-tena: € 12,99
2.4 Fonon-tsoratry ny LifeProof: € 39,99
2.5 Mpandahateny Bluetooth 10W misy jiro LED: € 59,99
3 Manomboka amin'ny 11:00
3.1 Headphones Bluetooth ho an'ny fanatanjahan-tena: € 14,89
3.3 Kit Starter an'ny Philips HUE: € 149
3.4 Monitor ny tahan'ny fo Polar H7: € 48,96
3.5 Miaraka amin'ny fijerena Activité: € 249
4 Manomboka amin'ny 12:00
4.1 Belkin WEMO plug: € 33,99
4.3 Mpandray feo Bluetooth 3.0: € 11,99
5 Manomboka amin'ny 13:00
5.1 Mpandahateny Bluetooth aogositra: € 14,36
5.2 Moto 360: 245 €
6 Manomboka amin'ny 14:00
6.1 Jawbone UP3:
6.2 Tselatra helatra Aukey: € 12,79
6.3 Dock ho an'ny iPhone sy Apple Watch: € 14,89
7 Manomboka amin'ny 15:00
7.1 Xiaomi Powerbank amin'ny 5.000 mAh: € 11,98
7.2 Philips HUE Lux: € 61,14
8 Manomboka amin'ny 16:00
8.1 Selfie stick miaraka amina lavitra Bluetooth
8.2 Ultimate Ears MEGABOOM Speaker: € 189,90
8.3 Harman Kardon SoundSticks III: 119,90 €
8.4 Case LifeProof Nuud ho an'ny iPhone 6 Plus
9 Manomboka amin'ny 17:00
9.1 Aukey bateria 6.000 mAh
9.2 180cm Tselatra taratra
9.4 Headphone Headband AUDIOMAX Bluetooth 4.0:
10 Manomboka amin'ny 18:00
10.1 Fiampangana ho an'ny iPhone sy Apple Watch
11 Fifanarahana bebe kokoa amin'ny zoma mainty
12 Efa vita ny tolotra
Manomboka amin'ny 9:00
Charger Aukey miaraka amina USB 3: € 11,99
Ampidiro indray mandeha ny fitaovana marobe miaraka amin'ity charger USB Aukey 3 ity.
Bateria 6.000 mAh: 15,99 €
Aza lany bateria mihitsy ao amin'ny iPhone miaraka amin'ity fitaovana ity izay ahafahanao mamita tsingerina famandrihana maro amin'ny findainao Apple raha tsy miankina amin'ny plug.
Mividy - Jackery® 6000mAh
Miaraka amin'ny refy: € 114,99
Raha te hanaraka ny lanjanao amin'ny alàlan'ny iPhone-nao ianao dia ilaina ho anao ity refy WiFi sy Bluetooth ity.
Mividy - Miaraka amin'ny mpandinika body Smart
Tselatra helatra voamarina: € 7,19
Makà tariby Lithgning faharoa amin'ny vidiny tsy hay tohaina, 0,9 metatra ny halavany.
Batterie 5.000 mAh misy tariby mandeha amin'ny Jiro: € 23,99
Vidio ity bateria 5.000 XNUMX mAh ity amin'ny tariby mandeha ao amin'ny Jiro ary hadino ny olana rehefa mameno ny iPhone amin'ny toerana rehetra ianao.
Mividy - Tsy misy vokatra.EasyAcc PB5000M - Baterin'ny finday ivelany (USB, 5000 mAh), mainty »/]
Tranga misy batterie anatiny ho an'ny iPhone 6: € 14,39
Ho an'ny € 14,39 dia sarotra ny mahita tranga tsara nefa koa io dia manana batterie anatiny 3.200 mAh anatiny, mbola sarotra kokoa aza izany. Azoko.
Mividy - Trangam-piarovana bateria 3200mAh
Mpandahateny Bluetooth 3W: € 39,19
Amazon dia manolotra antsika ny mpandahateny Bluetooth misy 3W ny herin'ny feo sy ny stereo miaraka amin'ny fihenan'ny 20%.
Mividy - Speaker Bluetooth azo entina
Spigen Slim Armor Case ho an'ny iPhone 6s: € 14,99
Spigen koa dia manolotra ny Tranga Slim Armor iPhone 6s Misongadina amin'ny fiarovana avo lenta azy izy ary amin'ny fanohanana kely hametrahana ny iPhone amin'ny toerana samihafa hijerena sarimihetsika na hitety Internet.
Mividy - Spigen Slim Armor
Manomboka amin'ny 10:00
Carger aukey misy seranana USB 2: € 16,99
Ampifandraiso amin'ny tariby misy ny lozisialy USB sy iPad ny tariby misy anao sy ny iPad-nao.
Speaker Bluetooth tsy misy rano: € 28,99
Raha te handro amin'ny mozika faran'izay tsara ianao dia mividy an'ity mpandahateny Bluetooth ity amin'ny alàlan'ny onjam-peo ary mihira ao ambanin'ny fandroana.
Headphones Bluetooth ho an'ny fanatanjahan-tena: € 12,99
Henoy ny mozika ankafizinao indrindra rehefa manao fanatanjahan-tena amin'ireto sofina an-tsofina miaraka amin'ny fifandraisana Bluetooth ireto.
Mividy - Bluedio Bluedio H +
Fonon-tsoratry ny LifeProof: € 39,99
Arovy ny iPhone amin'ny iray amin'ireo fonony tsara indrindra eny an-tsena. Mahazaka rano hatramin'ny 2 metatra ary milentika ao anaty rano hatramin'ny 2 metatra koa.
Mividy - LifeProof Fre - tranga ho an'ny Apple iPhone 6 / 6S
Mpandahateny Bluetooth 10W misy jiro LED: € 59,99
Herin'ny 10W sy seho maivana amin'ny feon'ny mozika tianao indrindra. Ity dia mpandahateny Bluetooth avy ao amin'ny Trust, izao amin'ny vidiny tsy hay tohaina.
Mividy - Fikomiana an-tanàn-dehibe avy amin'i Trust Dixxo
Manomboka amin'ny 11:00
Headphones Bluetooth ho an'ny fanatanjahan-tena: € 14,89
Averinay ny karazana vokatra fa amin'ity indray mandeha ity ny marika VicTsing, EC Technology na Mpow. SASANY headphone Bluetooth an-tsofina mampihatra fanatanjahan-tena nefa tsy miankina amin'ny telegrama manelingelina. Mampiditra mikrô izy ireo hampiasa azy ireo ho tsy misy tanana.
Mividy - Tsy misy vokatra. | EC Teknolojia | Tsy misy vokatra.
Aukey dia manohy manolotra ny batteriny amin'ny fihenam-bidy mahaliana ankehitriny. Ankehitriny dia anjaran'ity modely ity izay misongadina amin'ny fisaka sy ny fahaizany 8000 mAh.
Kit Starter an'ny Philips HUE: € 149
Ny takamoa malaza Philips LED dia ao anatin'ny Black Friday ihany koa. Fehezo ny jiro ao an-trano amin'ny alàlan'ny iPhone amin'ity vokatra ity.
Mividy - Philips Hue
Monitor ny tahan'ny fo Polar H7: € 48,96
Raha mitady ianao ny tahan'ny maso dia mifanaraka amin'ny iPhone, ny Polar H7 dia manana Bluetooth 4.0 hahafahanao maka ny tahan'ny fonao mandritra ny filalaovana fanatanjahan-tena. Mifanaraka amin'ireo fampiharana fanatanjahan-tena rehetra toy ny Runtastic na mitovy aminy.
Mividy - Polar H7
Miaraka amin'ny fijerena Activité: € 249
Araho ny asanao isan'andro amin'ity famantaranandro mahafinaritra ity avy amin'ny Withings. Tsy manana fialan-tsiny intsony ianao hananana bracelet atao hetsika ao anaty famantaranandro nentim-paharazana.
Mividy - Withings Activité
Manomboka amin'ny 12:00
Belkin WEMO plug: € 33,99
Alefaso na vonoy ny fitaovana lavitra amin'ny alàlan'ity switch Belkin WEMO ity. Ankehitriny miaraka amin'ny fihenam-bidy.
Mividy - Belkin F7C027ea
Raha mitady bateria ahazoana aina ianao ary manana fahaiza-miasa tsara dia araraoty ity tolotra ity hahazoana bateria 5000 mAh an'i Aukey.
Mpandray feo Bluetooth 3.0: € 11,99
Mandefasa signal audio amin'ny fitaovana rehetra mampiasa ny fifandraisana Bluetooth. Mila mampifandray an'ity mpandray ity amin'ny fidiran'ny mpanampy fotsiny ianao ary dia izay.
Manomboka amin'ny 13:00
Mpandahateny Bluetooth aogositra: € 14,36
Kely nefa mahery, ity dia ny mpandahateny Bluetooth Aogositra izay azonao amidy ankehitriny.
Mividy - Aogositra MS425B
Moto 360: 245 €
Inona izao Android Wear dia mifanaraka amin'ny iOSTsy misy tsara noho ny fahazoana ny Moto 360 hankafizanao ny fampandrenesana iOS eo amin'ny hato-tananay.
Mividy - Motorola Moto 360
Manomboka amin'ny 14:00
Vidio ity fehin-tànana amin'ny hetsika ity miaraka amn'ny maso maso tahan'ny natsangana ary araho amin'ny fomba tsotra sy kanto ny asanao.
Mividy - Jawbone upxnumx
Tselatra helatra Aukey: € 12,79
Ianao ve mila tariby faharoa handefasana ny iPhone-nao? Raiso ity avy any Aukey izay manana ny fanamarinana Apple ihany koa.
Dock ho an'ny iPhone sy Apple Watch: € 14,89
Ampianaro ny iPhone sy Apple Watch anao amin'ny seranan-tsambo iray ihany miaraka amin'ity fanohanana Vtin vita amin'ny aliminioma ity.
Manomboka amin'ny 15:00
Xiaomi Powerbank amin'ny 5.000 mAh: € 11,98
Manomboka amin'ny 15:39 hariva dia azonao atao ny mihazona ny Xiaomi PowerBank izay misongadina amin'ny vatany aluminium sy ny fahaizany 5.000 mAh.
Mividy - Xiaomi Powerbank
Philips HUE Lux: € 61,14
Raha te hanana mpivady ianao Jiro LED izay azonao fehezina amin'ny iPhone, Ity kitapo Philips ity dia mety aminao.
Mividy - Philips Hue Lux
Manomboka amin'ny 16:00
Selfie stick miaraka amina lavitra Bluetooth
Makà selfie amin'ny alàlan'ny findainao iPhone noho ity tapa-kazo ity miaraka amina blu-remotel. Mety ho an'ny finday hafa koa io. Manomboka amin'ny 16:39 hariva ny tolotra.
Vidio - Tsy misy vokatra.
Ultimate Ears MEGABOOM Speaker: € 189,90
Raha mitady mpandahateny Bluetooth mahery vaika sy tsara kalitao ianao, dia aza hadino ity varotra ity hahazoana ny Ultimate Ears MEGABOOM. Manomboka amin'ny 16:39 hariva ny tolotrao
Mividy - Ultimate sofina MEGABOOM
Harman Kardon SoundSticks III: 119,90 €
Na dia efa amina taona maro aza no niarahan'izy ireo namorona endrika mitovy (nandresy loka), ny tanora Harman Kardon SoundSticks kosa mbola tanora foana. Azo antoka, iray amin'ireo 2.1 tsara indrindra eny an-tsena. Manomboka amin'ny 16:39
Mividy - Harman Kardon Soundsticks III
Case LifeProof Nuud ho an'ny iPhone 6 Plus
Tsy maninona ny fomba itondranao ny iPhone 6 Plus anao, ny tranga LifeProof Nuud dia miaro azy amin'ny rano mitete hatramin'ny 2 metatra ary hatramin'ny fidirana vovoka, ranomandry na lanezy miaraka amin'ny taratasy fanamarinana IP-68 azy. Manomboka amin'ny 16:39
Mividy - LifeProof Nuud
Manomboka amin'ny 17:00
Aukey bateria 6.000 mAh
Manomboka amin'ny 17:29 dia azonao atao ny mandray an'ity bateria Aukey 6.000 mAh ity.
Mividy - Aukey® 6000mAh
180cm Tselatra taratra
iClever dia manolotra antsika ny tariby misy taratra jiro Apple voamarina miaraka amin'ny halavany 180 santimetatra. Raha mila tariby fandefasana fanampiny ianao, manomboka amin'ny 17:39 dia azonao atao izany.
Mividy - Tariby USB ho an'ny Apple (1.8 metatra)
Amin'ny 17:39 dia mividy ity fehin-tanana Xiaomi ity izy, tsotra be nefa mora vidy tokoa. Imbetsaka dia tsy ilaina intsony.
Mividy - Xiaomi Mi Band
Headphone Headband AUDIOMAX Bluetooth 4.0:
Notsapainay tamin'ny iPhone Actualiadd izy ireo ary tena tsara ny fahatsapanay. Araraoty ny Black Friday ary mahazoa telefaona an-tariby be loatra amin'ny tenanao miaraka amin'ny sandan'ny vola mihoatra ny vitsy.
Manomboka amin'ny 18:00
Fiampangana ho an'ny iPhone sy Apple Watch
Ampianaro ny iPhone sy Apple Watch anao isan-kariva amin'ny alàlan'ity fanohanana VicTsing ity izay hampihena ny vidiny amin'ny 18:39.
Fifanarahana bebe kokoa amin'ny zoma mainty
Ao amin'ny magazay Macnificos dia manana fihenam-bidy mahaliana vitsivitsy ho an'ny vokatra Apple izahay:
15% fihenam-bidy amin'ny kojakoja ho an'ny fitaovana iOS
10% fihenam-bidy amin'ny fitehirizana
10% fihenam-bidy amin'ny Fitaovana Mac
15% fihenam-bidy amin'ny Fahatsiarovana RAM
En Fnac manana fihenam-bidy 21% ianao amin'ny vokatra amidiny. Aza adino fa tsy maintsy mpikambana ianao hanararaotra an'io 21 isan-jato io, raha tsy izany, ny fihenam-bidy mivantana dia 16%.
Ny lafy ratsy dia voaroaka tsy ho marika i Apple fa amin'ny accessories na marika teknolojia hafa dia afaka manararaotra ianao. Ampidiro ny Fnac ary jereo ny fihenam-bidy anio sy rahampitso.
Ktuin koa manao toy izany ary manolotra fihenam-bidy tena mahomby amin'ny fividianana ny vokatra Apple. Amin'ny fihenam-bidy tanteraka, ny antsasany dia mivantana ary ny antsasany kosa manangona amin'ny fifandanjana handany ao amin'ny magazinao.
10% fihenam-bidy amin'ny iPhone
20% fihenam-bidy amin'ny Mac
20% fihenam-bidy amin'ny iPad Air
10% fihenam-bidy amin'ny Apple Watch
Efa vita ny tolotra
Ultimate Ears UE BOOM 2: € 129,90
Iray amin'ireo mpandahateny manga Ankasitrahana indrindra ny sandan'ny vola, azo zahana miaraka amin'ny fihenam-bidy 38%. Araraoty fa mividy be io.
Mividy - Ultimate Ears UE BOOM 2
Headphones Bluetooth ho an'ny fanatanjahan-tena: € 16,86
Raha manao fanatanjahan-tena ianao ary tianao ny miaraka amina mozika tsara indrindra miaraka amin'ireo Headphones Bluetooth ho adinonao ny tariby misy eo amin'ny iPhone sy ny sofinao.
Ny headphones Bluetooth Bluedio dia nihena 76%: € 112,99
Raha mila vitsivitsy ianao headphone tsy misy tariby, Manolotra kalitaon'ny feo tsara izany, mahazo aina ary manana fahaiza-manao multi-fantsona, ny Bluedio U izao dia azonao atao ny mahazo azy ireo amin'ny vidiny mahatsikaiky.
Mividy - Bluedio U
TP-Link PLC: € 79,96
Raha tianao izany ento any amin'ny Internet ny fifandraisana Internet anao izay tsy anananao rakotra WiFi na mety hampiasana tariby Ethernet, filokana tena tsara ity PLC ity ary ahena 53% ankehitriny.
Mividy - TP-LINK TL-PA8030P KIT
Tranga Neoprene iPad Air: € 7,59
Mividy - Amazon Basics DZS1311197 ...
Anker Astro E6 bateria 20.800 mAh: € 35,99
Ampidino imbetsaka ny iPhone fa tsy miankina amin'ny plug amin'ny 20.800 mAh an'ity bateria Anker Astro E6 ity izay azo vidiana miaraka amin'ny fihenam-bidy 20%. Misy ihany koa fahaiza-manao hafa raha toa toa toa mavesatra loatra aminao ity tolotra maodely ity.
Mividy - Anker Astro E6
JBL Pulse Speaker: € 118,70
Raha mila mpandahateny Bluetooth ianao izay, ankoatry ny maneno tsara dia manome aina ny lanonana fampisehoana jiro LED anao, ity JBL Pulse ity dia azo vidiana miaraka amin'ny fihenam-bidy 41%.
Mividy - JBL Pulse
Tselatra fahazavana 10cm miaraka amin'ny mari-pahaizana MFi: € 5,99
Raha mila a tariby fohy entina rehefa mandeha dia ianao, ao anaty kitaponao na hanananao azy eo am-pelatanana hatrany, ity iray avy amin'ny Amazon Basics ity dia manana mari-pankasitrahana MFi ary atolotra amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
Mividy - Tariby mifandray amin'ny jiro 10 cm
Selfie Stick miaraka amin'ny Shutter Remote: € 11,99
Ny fitiavan-tena dia fironana ary raha mbola tsy manana ny anao ianao, dia maodely iray tena mahaliana ihany koa no atolotra an'io misy fanentanana lavitra Bluetooth maka sary lavitra.
Mividy - Selfie stick miaraka amina lavitra Bluetooth
Na dia mbola misy andro vitsivitsy aza ny zoma mainty, ny sasany magazay toa an'i Amazon dia efa nanomboka nanolotra fihenam-bidy mendrika ny hararaotina izany. Androany no ahitantsika ireto varotra manaraka ireto:
Tariby azo sintonina miaraka amin'ny mpampitohy amin'ny tselatra sy ny mari-pahaizana MFi: 8,79 €
Raha mila tariby hamerenana ny iPhone rehefa mandeha ianao dia mety safidy mety ity:
Mividy - MFi tariby azo raisina azo raisina patch patch
Vtin Bluetooth Speaker: € 26,30
Mahalana ianao no mahazo a Mpandahateny Bluetooth misy feo stereo ary kalitaon'ny fitaovana sasany amin'ity vidiny ity.
Raha tianao izany mameno ny iPhone, iPad na ny fitaovana hafa Izany dia mampiasa ny fifandraisana USB, ity bateria Aukey ity dia mampanantena anao fa tsy maintsy mihetsika kely ianao nefa tsy mila mampiasa plug.
Hanavao ny lahatsoratra izahay rehefa misy tolotra misimisy kokoa, aza hadino izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Zoma mainty 2015, tolotra tsy hay tohaina izay tsy azonao hadino
changgeek dia hoy izy:
Ny zoma mainty sy ny alatsinain'ny cyber dia any Etazonia, aza manambola, tsy ho hitanao mihitsy ny fihenam-bidy an'io firenena io amin'ny hafa eran'izao tontolo izao.
Mamaly an'i altergeek
Diso ianao, eto Brezila dia andro malaza be io, be ny varotra ataon'izy ireo, tsy azonao an-tsaina ny tsipika eny amin'ny fivarotana fitaovana elektrika.
TotalMount Pro: fitaovana fanampiny hanafenana ny Apple TV ao ambadiky ny fahitalavitra
Ny Story Explorer an'ny SNAPCHAT dia manome anao fomba fijery misimisy kokoa